Nabadoon Diiriye “Dhibaatada Guriceel haku ekaato saddexdaasi maalmood” | Dhacdo
Home Wararka Maanta Nabadoon Diiriye “Dhibaatada Guriceel haku ekaato saddexdaasi maalmood”
Nabadoon Cabdullaahi Salaad Diiriye oo ka mid ah Odayaasha Magaalada Guriceel ayaa ku baaqay in la joojiyo colaadda ka taagan magaaladaasi.
Nabadoon Cabdullaahi Salaad Diiriye ayaa ku baaqay in aan dhibaato kale laga horseedin magaalada, laguna joojiyo halka ay maanta ku ektahay.
“Waxaan baaq u dirayaa labada garab ee meesha ku diriraya, dhibaatadii ka dhacday meesha, tii dhacday maahee wixii dambe in la joojiyo, oo tii hore ay ku ekaato, waxaan leeyahay joojiya dhibaato way dhacday.” Ayuu yiri Nabadoon Cabdullaahi Salaad Diiriye oo BBC la hadlay.
Waxa kaloo uu yiri “Saddex maalmood wixii meeshaas ka dhacay wax kale haku darinina ee joojiyaa leeyahay, dagaalka joojiya. Dowladda iyo Culimada meesha ku dirireysaa leeyahay joojiya dagaalka.”
Labada dhinac ayuu sidoo kale ugu baaqay inay u turaan dadka ka barakacay magaalada ee ku dar xumeysan duleedyadeeda.
“Dadkii bannaanka ayay yeellaan, qorax iyo qabow, waayeelkii, carruurtii iyo dadkii kale, waxaa jira dad maalinle ahoo oo muruqood ku nool oo maalintii waxay soo shaqeystaan ku noollaa.” Ayuu yiri Nabadoon Cabdullaahi Salaad oo intaasi ku daray “Mid xamaalanayay iyo mid kabo caseynayayba, dadkaasi danyarta ah meesha waa ku lumeen. Marka waxaan leenahay Ilaahay ha idin tuso ummadda meesha ku baaba’eysa.”
Nabadoonka ayaa xusay inaysan odayaashu lahayn awood ay kaga hortaggi karaan laba garab oo hubeysan, aan ka ahayn inay ugu baaqaan in ay dagaalka joojiyaan.
“Laba garab oo hubeysan, anaga waxaan awoodi karno waxaa weeye inaan baaq u dirno, oo aan dhahno joojiya, taasaa anaga awoodi karnaa, ee anaga dad hubeysan ma nihin. Waxaan nahay shacabkii magaalada oo lagu kor dagaalamay oo hantidoodii la burburiyay, dadkoodiina la barakiciyay, awoodna uma hayno aan hadda ku kala celino ama aan tallaabo kaga qaadi karno malahan.” Ayuu yiri Nabadoonku.
Saddexdii maalmood ee la soo dhaafay waxaa Guriceel ka dhacay dagaal ay ku dhinteen dad u badan labada dhinac, oo Saraakiil ay ku jirto.
Previous articleQaylo dhaanta ka soo yeeraysa duleedka Guriceel oo korodhay
Next articleCiidamada Dowladda oo guluf aan buurnayn ka wada Guriceel